GoWikipedia - Wikipedia:Administrators
ဤစာမျက်နှာကို တိုတိုပြောရလျှင်: Administrators are users trusted with access to certain tools on the Myanmar Wikipedia. They are expected to observeahigh standard of conduct, to use the tools fairly, and never to use them to gain advantage inadispute.
စီမံခန့်ခွဲသူများ ဆိုသည်မှာ စာမျက်နှာများကို ဖျက်နိုင်၊ ထိမ်းသိမ်းထားသော စာမျက်နှာများကိုပြင်နိုင်သော သူဖြစ်သည်။ အက်ဒမင်ဖြစ်ချင်ပါလျှင် ဤနေရာတွင် m:requests for permissions လာရောက်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဆိုလျှင် ပို၍သင့်တော်ပါသည်။
ဝီကီသူကြီး (sysop) သည် ဝီကီ အသုံးပြုသူများကို ကူညီပြီး နှောက်ယှက်ရန်များမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ ဝီကီသူကြီးများသည် ဝီကီကို မှန်မှန်ဝင်ရောက် စစ်ဆေးလေ့ရှိသည်။ ပြုပြင်ရေးသားရန် အတွက်မူ ဝီကီသူကြီး ဖြစ်ရန်မလိုပေ။ သို့သော် အနည်းငယ်မျှသော ဗဟိုစာမျက်နှာကဲ့သို့ စာမျက်နှာများ ပြင်ဆင်ရန်အတွက်မူ ဝီကီသူကြီး ဖြစ်ရန်လိုသည်။
မည်သည့် ဝီကီ ဝိုင်းတော်သားမဆို ဝီကီသူကြီး အဖြစ် Requests for adminship တွင် မိမိဘာသာ ထည့်သွင်း လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ယခုထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ဝီကီသူကြီးများ ဤတွင် ကြည်ရှူနိုင်သည်။ ဝီကီသူကြီး တင်မြောက်ခြင်းကို မည်သူမဆို မဲပေးနိုင်သော မဲဆန္ဒဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပါသည်။ ဝီကီသူကြီး၏ လမ်းစဉ်များကိုလည်း ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
အက်ဒမင် ရပိုင်ခွင့်ရှိသည့် လက်ရှိစာရင်း
* * * အလိုအလျောက် စာရင်းထုတ်ပေးထားသည်ကို ဤတွင် ကြည့်ရန်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Administrators&oldid=336731" မှ ရယူရန်